Janaayo | 2012 | WEEJIDOW | Baal 2
Archive for Janaayo, 2012
Shariif Xasan: “Gacan ka xaq daran ayaa dishay Xasan Fantastic
Janaayo 30, 2012
Geeridii naxdinta laheyd ee ku timid Agaasimihii Shabakadda Warbaahinta Shabelle Xasan Cismaan Cabdi ayaa sii hayaha Madaxweynaha ahna Gudoomiyaha baarlamanka KMG Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan waxa uu tacsi tiiraanyo leh u diray dhamaan eheladii, qarabaadii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday Allaha Unaxariistee Marxuum Xasan Cismaan Cabdi (Fantastic).
Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxa uu sheegay in Agaasimihii Shabelle ay dishay gacan ka gardaran, isagoo Allah ka baryay in uu ifiyo ciddii ka dambeysay dilka Marxuum Xasan Cismaan (Fantastic), waxaana wax fool xun uu ku tilmaamay in Umadda Soomaaliyeed maalin waliba laga dilo dadka wax galka u ah ee u adeegaya.
Gudoomiyaha barlamanka KMG Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda aysan raali ka aheyn dilka wariyeyahaasi, isagoo rajo ka muujiyay in Ciidamada ammaanka arintaasi ay u kuur galayaan islamarkaana ay baaritaano ku sameyn doonaan, wuxuuna carabka ku dhuftay in barlamanka KMG ah arintaasi uu ka xunyahay islamarkaana uu cambaareynayo.
Maalin ka hor ayaa labo ruux oo ku hubaysan Bastoolada waxaa ay Agaasimaha Idaacadda Shabelle ku dileen xilli uu galayay gurigiisa uu ku yaala Xaafadda Nasteexo degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, iyagoo dhowr xabadood ku dhuftay Agaasimaha islamarkaana ka baxsaday goobtii ay dilka ka gaysteen.
MADOOBE NUUNOW: “Shirka London ka dhacaya Baarlamaanka boos ugama bannaana, Xukuumadda ayuu khuseeyaa
Xildhibaan Madoobe Nuunow Maxamed oo ay xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka u doorteen guddoomiye ayaa ka sheegay shir uu guddoominayay oo maanta ka dhacay xarunta golaha shacabka in baarlamaanku uusan ka qaybgalay shirka ka dhacaya London.
Mudane Nuunow ayaa sheegay in shirka ka furmaya London ay ka qaybgalayso xukuumadda, lagana doonayo go’aannadii kasoo baxa inay horkeento baarlamaanka si xildhibaannadu ay dib u eegis ugu sameeyaan.“Shirka bisha soo socda ka dhacaya London ka qaybgalkiisa boos ugama bannaana baarlamaanka, ka qaybgalkiisa waxaa iska leh xukuumadda KMG, iyada ayaana laga rabaa inay wixii meeshaas lagu soo go’aamiyo horkeento baarlamaanka, waa haddii la raacayo sharciga dalka u yaalla,” ayuu yiri Madoobe Nuunow.
Xildhibaan Madoobe Nuunow wuxuu sheegay inaysan nidaam ahayn in shirarka la qabanayo ay cid walba ka qaybgasho, isagoo taas ku tilmaamay inuu yahay shuqul jabhadeed laga soo gudbay.
“Hay’adaha dowladda, beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed, waxaan si cad ugu sheegaynaa in baarlamaanku uu go’aansaday inuusan ka qaybgalin shirka ka dhacaya London,” ayuu hadalkiisa ku daray.
Intaas kaddib, waxaa xildhibaannadii baarlamaanka ee shirka ka qaybgalay laga hor akhriyay qoraal ay kasoo saareen shirka London, iyadoo qoraalkaas lagu sheegay in baarlamaanka in howlihii iyo qiimihii baarlamaanka uu leexiyay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ay sheegeen inay horay xilka uga qaadeen.
Ugu dambeyn, qoraalka waxaa lagu sheegay in baarlamaanku uu san wax shulqul ah ku lahayn ka qaybgalka shirarka caalamiga ah, balse ay howshiisu tahay inuu ka doodo heshiisyada la gaaro si uu u ansixiyo ama u diido.
Markii Gaalkacyo la keeney Dhaawicii laga kenay Buuhoodle ee SOOMAALIYA
Madaxweynaha dalka Biniin oo loo doortay inuu noqdo Gudoomiyaha cusub ee ururka Midowga Afrika Madaxweynaha dalka Benin Thomas Boni Yayi
Waxaa maanta xarunta Cusub Ururka Midowga Afrika magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ka furmay shir madaxeedkii 18-aad ee ururka Midowga Afrika, waxaana shirkaasi maanta loogu doortay inuu noqdo Gudoomiyaha cusub ee ururka Midowga Afrika Madaxweynaha dalka Benin Thomas Boni Yayi.
Shirkii maanta ee ururka Midowga Afrika ayaa waxaa looga hadlay Ajandayaal ay ka mid tahay arrinta Soomaaliya, iyadoo halkaasi looga hadlay sidii ciidamada AMISOM ee haatan tiradoodu tahay 10,000 oo askari lagu dadaalo sidii loo gaarsiin lahaa ciidamadaasi ilaa 17,000 oo askari, iyadoo madaxda Afrika ay arrintaasi rajo fiican ka muujiyeen.
Qodobbada looga hadlay kulankaasi ayaa waxaa ka mid ah arrimaha ka taagan dalalka Sudan, Algeria, Nayjeeriya, Maali and Mauritania, wuxuuna shirkaasi socon doonaa muddo laba casho ah.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka mid ah madaxda Afrika ee ka qaybgalaya shirka ururka Midowga Afrika ee sannadkan ka duwan sannidihii hore maadaama lagu qabanayo xarunta cusub ee ururka oo ku fadhida 100-mitir oo dhul ah, wuxuuna kulankaan noqonaayaa kii ugu waynaa oo ay madaxda Afrika eeshaan kaddib dilkii hoggaamiyihii Liibya Mucamar Al-Qadaafi.
Madaxweynaha Benin ayaa xilka guddoomiyaha ururka Midowga Afrika kala wareegayaa madaxweynaha dalka Equatorial Gini Teodoro Obiang Nguemaoo isagu xilkaas hayay muddo hal sano ah.
Kitaabka aduunka ugu weyn oo la qoray.. DAAWO SAWIRO
>Wadaad iyo ardeydiisa oo ku nool dalka Afaganistaan ayaan in muda ah waxa ay ku mashquulsanayeen sidii ay ugu qori lahaayeen QURAANKA Kitaab weyn oo ah kitaabka aduunka ugu dheer ama ugu weyn kaa oo haatan lagu qiyaaso in uu yahay mid ugu dheer dhirir ahaan iyo balac ahaan waxaana lagu qiyaasay dhirirkiisa ilaa 1-mtr halka balicisana lagu sheegay in uu yahay ilaa 2mtrs.
Wadaadkaan ayaa dhawaan waxa uu usoo bandhigay warbaahinta in Kitaabkaasi uu yahay midka ugu weyn haatan inta lagu hayo aduunka.
Warmurtiyeedka IGAD maanta “Shariif Xasan lagama qaadi karo jagada
Warmurtiyeed dhinacyo badan taabanaayo oo laga soo saaray shirkii madaxda ururka Goboleedka IGAD ay ku yeesheen Dalka Ethiopia ayaa lagu taageeray in Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya uu yahay Shariif Xasan , lagana qaadi karin jagada iyada oo la raacayo heshiiskii qeybaha soomaaliyeed ku yeesheen Ugandha, waxay kaloo taageereen horumarka la taaban karo oo ay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ka soo hooyeen howlgalladii ay Muqdisho uga sifeeyeen maleeshiyada Al-shabaab.Shirkaasi oo ay ka qayb galeen Madaxweyaha Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheikh Axmed, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle, Madaxweynaha Sudan Cumar Xasan Al Bashiir, Madaxweyaha Kenya Mwai Kibaki, Madaxweyaha koonfurta Sudan Salva Kiir Mayardit, R/wasaaraha Dalka EthiopiaMeles Zenawi oo marti loo ahaa, Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Dalka Uganda Henry Okello Oryem iyo madax kale oo shirkaasi lagu casuumay.
Shirka ayaa markii uu soo dhamaaday waxa ay mas’uuliyiintii ka qayb gashay ka soo saareen warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban, kaasi oo ay ugu horeyso taageero loo soo jeediyay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM horumarka ay ka sameeyeen howlgalladii ugu dambeeyay ee ay Muqdisho kaga saareen maleeshiyada Al-shabaab, taasi oo ay madaxdu ku tilmaameen mid wanaagsan oo amniga wax weyn ka badashay.
Warmurtiyeedka waxaa lagu sheegay in madaxdu ay soo dhaweyneyso hanaanka lagu xasilinayo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, taasi oo ay ku tilmaameen in ay qayb ka tahay howlgallada guud ahaan Soomaaliya looga saaro Al-shabaab.
Warmurtiyeedka waxaa kaloo lagu taageeray doorka ciidamada wadamada Kenya iyo Ethiopia ay ka cayaareen xagga nabad ku soo dabaalidda Soomaaliya, iyagoo madaxda IGAD ay markale soo dhaweyeen taageerada ay ciidamada labadaasi dowladood sii nayaan kuwa Dowladda Soomaaliya.
Shirka waxaa kaloo ay madaxdu talaabo wanaagsan ku tilmaameen sida dowladda Ethiopia ay uga jawaabtay codsigii Dowladda KMG ah ee Soomaaliya iyo kii urur Goboleedka IGAD ee ahaa in ciidamadoodu ay gacan ka geystaan sidii Al-shabaab looga cirib tiri lahaa gobolka oo dhan.
Madaxda IGAD ayaa waxa ay ku baaqeen in la krodhiyo taageerada la siinayo ciidamada qalabka-sida ee Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalina ah ee Midowga Afrika, si loo xoojiyo amniga ka jirta Soomaaliya.
Warmurtiyeedka laga soo saaray shirkii ay madaxda urur Goboleedka IGAD ku yeesheen magaalada Addis Ababa ayaa waxaa madaxda dowladda loogu baaqay in ay gacan weyn ka geystaan arrimaha dib-u-heshiisiinta, Siyaasadda, xoojinta amniga degmooyinka Gobolka Banaadir iyo in ay maamullo ka hirgeliyaan goobaha Al-shabaab laga xoreeyo.
Madaxda IGAD waxay kaloo Madaxda dowladda Soomaaliya ka dalbadeen in la qadariyo hannaankii nabadda ee Jabuuti, heshiiskii Kampala iyo qorshe howleedka Road-Map-ka, si looga gudbo marxaladda KMG ah.
IGAD ayaa waxa ay soo dhaweysay qaraarkii tirsigiisu ahaa 2023 (2011) ee ay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay markale cunuqabateynta ku kordhisay dowladda Eretria oo lagu eedeeyo in ay taakuleyn milateri siiso maleeshiyada Al-shabaab.
War deg deg ah: Qarax hadda Muqdisho ka dhacay
Qarax Xoogan ayaa goordhaw oo Caawa waxa uu ka dhacay agagaarka Dakada Magaalada Muqdisho .
Qaraxa ayaa waxaa kasoo baxaya Warar kala duwan iyadoona aan wali si rasmi ah loo heyn waxa uu ahaa Bam Gacmeed iyo in uu ahaa Miino wadada lagu aasay.
Qaraxa ayaana lala eegtay Ciidamo katirsan Dowlada KMG ee Soomaaliya oo xiliga uu qaraxu dhacayay marayay meel aan ka fogeen halka uu qaraxu ka dhacay.
Ciidamada Dowlada ayaana rasaas culus furay qaraxa kadib iyadoona dadkii ka agdhawaa halka uu qaraxu ka dhacay ee ka kala firdhadeen goobtaasi si eesan waxyeelo uga soo gaarin.
lama oga qasaaraha ka dhashay Qaraxa Caawa ka dhacay afaafka hore ee Dakada Magaalada Muqdisho iyo sidoo kale Rasaasta ee fureen Ciidamada Dowlada.
Qaraxa caawa ayaa kusoo aadaya xili habeenkii xalay qaraxyo banbaano lagu weeraray Xarunta Hay’ada UNDP ee Magaalada Muqdisho.
Shirqoolkii DM ee London oo La Kashifey In Ay Dad Dano Gaar Ah Wata Iney Abaabuleen (DAAWO)
Janaayo 29, 2012
Sida aad ka daawan doontaan Video-gan hoose, waxaan idin soo gudbineynaa in dad dano gaar ah wata ay ku mashquulsan yihiin si ay ummadda ku qaldaan oo ay u yiraahdaan shirbaan u qabaneynaa qowmiyada DigilMirifle, iyada oo la wada ogsoon yahay nimanka horboodaya shirkan ama abaabulayaba aysan wax sharaf ah ku leeyihiin ummada dhexdeeda haba yaraatee aysan jirin.
Shirkan waxaa abaabuley shakhsiyaad iska leh NGO laguna magacaabo Peace & Development Research Somalia kaas oo ay ugu raadsanayaan dhaqaale hey`adaha ama dowladaha daneeya arimaha Soomaaliya, koley qofkii taga goobtaas waxa uu ku arki doonaa boorarka NGO-gan.
Danta laga leeyahay shirkan koley ma dhaafsana dhaqaale gaar ah lagu raadsanayo oo keliya, taasna waa ka dheregsan yihiin qowmiyadda DM oo ku dhaqan dalkan UK ee waxaa la rabaa oo keliya in la qaldo shacabka kale ee degan dalal kale iyaguna waan uga digeynaa.
Sida walaalha Minnesota degan ay u garteen in arintaan aysan ahayn mid wax dan ah ugu jirto qowmiyada DM, Waxaan leenahay walaalaha meel waliba ha joogaane haka foojignaadeen nimankan marada duuqowdey isku daboolaya.
Waxa yaabaha lagu qaraabto waxaa ka mid ah dadka ka soo qeyb galayaasha shirkan waxaa ka mid ah Prf. Mohamed Sh Osman Jawaari, taas oo waxba ka jirin oo been ah, Prf. Jawaari waa uu diidey in magciisa lagu qaraabto, sida ay u diideen dad badan oo degan aduunka dacaladiisa, xitaa waxaa diidan niman ay saaxibo ahaayeen oo ay isku ag dhowaayeen waxa ay yiraahdeen DM NGO Ma ahan. Ummadan dhibaato waa ka daashey ee yaan midkale loogu darin.
Warbixin shirka lagu soo dhoweyey wasiirka Minnesota ee dalka USA
Waxaa asbuucii la soo dhaafey magaalada Minnesota gaarey wasiirka kaluumeysiga iyo kheyraadka bada Md. Abdulrahmaan Sh Ibraahim, waxaana jaaliyada DM ee gobolkaas ay u qabteen shir lagu soo dhoweynaayo wasiirka, sida ay walaalhan Video-ga ku xuseen.
Waxaa is weydiin leh marka shakhsiyaad caadhifad qabiil aad ugu duleyneysid, shakhsiyad kalena aad ku buun buunineysid iyada oo aan weligoodba ummada waxa ay u qabteen jirin.
Ma qabiilbaa qabiil ka kale ka sharaf badan mise shakhsiyaad baa mudan in loo duleeyo shakhsiyaad kale?
Adiga oo ka hormarinaaya dantaada gaarka ah mida guud miyaad ummada u af-lagaadeyneysaa adoona og inaan meeshaas waxba ka soo baxeynin?.
Dhowr iyo labaatan sano wixii aan ku hormari weyney miyaad hada rabtaan in ummada aad ku sanduleysid hada ayey anagu na soo gaartey?
DM ma dad gaar ah ayaa iska leh, qadiyadda ma dadbey u af-duubantahay, dadka kalena waa ka reeban tahay miyaa?
Taas waxaan leenahay MAYA THUMA WALAAHI MAYA waanu kaa diidney ee taariikhda dib u baar.
Halkan hoose ka aqriso xigashada wararkaas
FG. tobanka magaalo oo Kenya sheegtey iney duqeyneyso loona saarinaayo wasiirka gaashaan dhiga waxaa ka hadley una fasaxey in kenya ay duqeyso xildhibaan u dhashey DM, kaas maalina wax lagama sheegin isagana kula qabiilmiyaa tolow?
Filo mar dhow arrimo badan oo aan ku kashifi doono NGO-gan lagu qaraabanaayo. Waxaana soo deyn doona wareysiyo aan kaga bixin doono TV-yada UNIVERSAL, SOOMAALICHANNEL iyo kuwa kale oo ku saabsan arintan fooshaxun ee lawado.
War deg deg ah: Ciidamo ka tirsan al shabaab oo xiray xasan daahir aweys
Wararka naga soo gaaraya degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab inay isku gadaameen beerta Cali Mahdi Maxamed oo ay ku sugnaayeen madax sare oo ka tirsan isla xarakada Al-Shabaab, halkaasi oo kulan gaar ah uga socday mas’uuliyiin uu ka mid yahay Sheekh Xasan Daahir Aweys oo dhowaan ku biiray Shabaabka.
Ciidamada ururka Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday beerta uu shirka ka socday ayaa isla markiiba hubka ka dhigay ciidamo kale oo ilaalinayay madaxda halkaasi shirka uga socday kaddibna ka kaxeystay mas’uuliyiin uu ka mid yahay Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo xubno kale oo ka tirsanaa garabkiisa.Wararka ayaa sheegaya in ciidamada howlgalkaasi fuliyay ay ka socdeen garabka ururka Al-Shabaab ee uu hoggaamiyo Sheikh MUkhtaar Roobow Al-Mansuur, iyadoona ciidamadii halkaasi soo weeraray ay Xasan Daahir Aweys Xireen ulana dhaqaaqeen dhinaca degmada Afgooye waddo ka sii baxda oo dhinaca degmada Marka u baxeysa.
Dhinaca kale wararku waxay intaasi ku darayaan in howlgalka lagu qabtay Sheekh Xasan Daahir iyo saraakiisha kale aanay wax shaqaaqo ah ka dhicin Al-Shabaabka dhexdiisa, inkasta oo markii labada ciidan is arkeen xoogaa yara qori isku taag uu meesha ka dhacay
War deg deg ah: Guri uu Degan Yahay Xildhibaan ka Tirsan Baarlamaanka KMG Soomaaliya oo Xalay La Weeraray
Guri uu magaalada Muqdisho ka degan yahay xildhibaan C/raxmaan C/shakuur Warsame oo ka mid ah baarlamaanka KMG Soomaaliya ayaa xalay lagu weeraray bambo gacmeed, sida ay xaqiijiyeen xildhibaano ku dhow mudanaha.
Guriga uu degan yahay xildhibaanka oo ku yaalla xaafada Buulo Xuubeey ee magaalada Muqdisho ayaa fiidkii lagu tuuray bambooyin nooca gacanta laga tuuro.
Mid ka mid ah waardiyaasha guriga xildhibaanka ayaa ku dhaawacmay mana jirsaan khasaare kale ee ka dhashay weerarkan.
Xildhibaan C/raxmaan C/shakuur ayaa u sheegay Idaacadaha in waqtigaasi uu guriga joogay hase yeeshee waxba aysan soo gaarin.
Weerarkan ayaa ku soo beegmay saacad ka dib markii bambo kale lagu tuuray dhismaha hay’ada UNDP ay ka degan tahay Muqdisho oo ku yaalla wadada dheer ee isku xirta Garoonka diyaaradaha iyo isgoyska KM4.
Weerarka xarunta UNDP ayaan la sheegin wax khasaare ah oo uu geystay.
Idaacadda Al-Shabaab ee Andalus ayaa saaka sheegtay in weeraro lagu qaaday guryo ay degan yihiin masuuliyiin ka tirsan dawlada, weeraradaasi oo ay ku sheegtay inay qaadeen Al-Shabaab.
Saraakiisha amaanka ee DKMG ayaan haba yaraatee ka hadlin weeraradan bambooyinka loo adeegsaday ee lagu qaaday goobahan kala duwan ee Muqdisho ku yaalla.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Janaayo, 2012.